नेपाल बन्द म्यानपावर सप्लाई एजेन्सी विज्ञापन - Ek Jamarko
Home / मनोरन्जन / नेपाल बन्द म्यानपावर सप्लाई एजेन्सी विज्ञापन
नेपाल बन्द म्यानपावर सप्लाई एजेन्सी विज्ञापन
नेपाल बन्द म्यानपावर सप्लाई एजेन्सी
~आदरणीय आन्दोलनरत राजनैतिक दल एवं सरकार पक्ष साथै प्रतिपक्षमा रहनुभएका दलका नेता महोदय हरु । तपाई हरुले गर्दै आउनुभएका आन्दोलन र बन्द एवं चक्काजाम का कार्यक्रम हरु सोचे अनुरुप सफल हुन नसकेको देखीदै आईरहेको छ । आन्दोलन सफल हुनलाई पहिले पहिले घोषणा मात्र गर्दिए पुग्थ्यो तर अचेल आन्दोलन लाई रोचक एवं घोचक बनाउन सकीएन भने आन्दोलन विचैमा तुहिने र बन्द असफल हुने सम्भावना प्रवल हुदै गईरहेको छ ।
~यस्तो जटिल परिप्रेक्षमा नेता महोदय हरुको आन्दोलन एवं बन्द लगायतका कार्यक्रम फितलो नहोस भन्ने हेतुले हामी तपाईहरुको आन्दोलन एवं बन्द कार्यक्रम भब्य रुपमा सफल पार्नका खातीर मुख्यतया चाहिने जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालनको गर्ने गर्दछौं। हजुर हरुको आवस्यकता अनुसार चाहिएको स्थानमा योग्य जनशक्ति यथासक्य छिटो उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। हामी संग अहिले उपलब्ध जनशक्ति एव तिनीहरुको पारिश्रमीक तपशील बमोजीम रहेको छ ।
॰॰॰॰॰॰॰॰ 1. गुण्डा (नारा एवं जुलुस कर्ता) ~ ५००/-
2. दादा (धाकधम्की एवं डरत्रास दाता) ~ ६००/-
3. उग्रबादी ( तोडफोड कर्ता)~ १०००/
4. हिरोनी(भाषण तथा मनोरनंजनकर्ता) ~ ५०००/-
5. पत्रकार~ १०००/-
6. विदेशी नागरीक~ ५००/- (डलर)
~हामी संग उपलब्ध गुण्डा हरुसंग भाटा समेत हामी उपलब्ध गराउनेछौ भाटाको अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । हाम्रो 'दादा' हरु ' 'टायर एण्ड फायर' तालीम प्राप्त भएको कारण हजुर हरुले टायर फायर कार्यक्रम मा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । टायर आवस्यकता अनुसार आपुर्ती ब्यबस्था मिलाईनेछ । टायरको अतिरीक्त शुल्क लाग्नेछ जसको रेट आपसी सहमतीमा तय गरिनेछ । उग्रवादी को हकमा हामी शसस्त्र विद्रोहमा लामो अनुभव संगालेका युवा हरुको रोजगारी लाई मध्येनजर राख्दै प्राथमीकता दिईएको कारण लडाकु हरुको सिपलाई हजुर हरुले आफ्नै तरिकाले उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हतियार को हकमा पिस्तोल देखी एके ४७ सम्म चलाउने योग्यता भएका हुनेछन । ड्युटी समय १२ घण्टा हुनेछ। रातिमा प्रयोग गर्नुपरेमा अतिरीक्त शुल्क लाग्नेछ ।
~हिरोनी हरुको हकमा सुपर हिट फिल्म खेलीसकेकी हिरोनी चाहीएको हो भने तपाई हरुले केन्द्रीय सदस्य या आउने संसदिय निर्वाचनमा उमेदवार बनाउनेछौं भनेर घोषणा पनि गर्दिनुभए परिश्रमीकमा छुट पाउने सम्भाबना रहन्छ । त्यसपछी दैनिक म्याद थप्ने र पारिश्रमीक दिईरहनुपर्ने झन्झट बाट तपाई हरु मुक्त हुनुहुनेछ। नयाँ हिरोनी र मोडलको हकमा हजुरहरुले कुनै अतिरीक्त संझौता गर्न पाउनुहुनेछैन । खास गरी आन्दोलनलाई दिनभरी रोचक बनाईराख्न तपाईहरुका केन्द्रीय नेतृत्व कर्ता हरुलाई संगै नाच्ने ब्यबस्था समेत मीलाईनेछ ।
~ विदेशी नागरीक को भन्नाले भारतिय नागरीक बाहेकका नागरीक (गोरो छाला भएका) मात्र आपुर्ती गरिनेछ। विषेशत: सामाजीक संजालमा केही लेखेर विरोध जनाउन या समर्थन गर्नका लागी अथवा टाउकोमा तपाई हरुले उपलब्ध गराउनुभएको झण्डा या पट्टी बाँधेर धर्नामा वस्न को लागी प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा समेत लगाउनेछन । आन्दोलनलाई सकेसम्मको ग्ल्यामरस दृष्य प्रदान होओस भनेर उनीहरुको लुगा सकेसम्म छोटा र गन्जी कट्टु मात्र प्रयोग होओस भन्ने विषयमा समेत हामी सचेत छौं ।
~ हामीसंग उपलब्ध पत्रकार हरु आन्दोलनमा सहभागी हुदा समग्र रुपमा हजुर हरुको पक्षमा समाचार हरु लेख्नुहुनेछ। समाचार कतै कुनै पत्रीकामा नछापीए पनि पत्रकार का ब्लग र फेसबुक टाईमलाईनमा छाप्ने जिम्मेबारी पत्रकार स्वयंको हुनेछ । क्यामरा आन्दोलनरत पक्षले दिनुपर्नेछ । ॰॰॰॰॰॰
~अन्तमा , आन्दोलनकारी घाईते भएमा उपचार खर्च प्रदान गरिनेछ र मृत्यु भएमा निश्चित रकम दिईनेछ भनेर घोषणा तपाई हरुले गर्नुपर्नेछ । हाम्रो एजेन्सी बाट सप्लाई हुने सम्पुर्ण आन्दोलनकारी जनशक्तिको स्वास्थ्य एवं जीवन विमा गरिएको ले तपाईहरुलाई अतिरीक्त रकमको भार पर्नेछैन । यातायातको ब्यवस्था आन्दोलनरत पक्षले मीलाउनु पर्नेछ ।
~हामी तपाईहरुको आन्दोलन एवं बन्द कार्यक्रम भब्य रुपमा सफल होस भन्ने शुभकामना दिन्छौं । जय नेपाल बन्द..!
नेपाल बन्द म्यानपावर सप्लाई एजेन्सी विज्ञापन Reviewed by Jamarko TV on मई 26, 2016 Rating: 5